Ihowuliseyili abenzi ngelaphu lokucoca ulwelo kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
Ipholiyesta yokuCoca ilaphu iMonofilament yokuCoca ilaphu yePalm yeoyile yePolyester yokuCoca ilaphu, eyenziwe nge-polyester fiber (PET), ibandakanya amalaphu okutya e-PET, amalaphu e-PET amade, kunye ne-PET monofilament amalaphu. Ezi mveliso zinempahla ye-acid-ukumelana, i-alkali efanelekileyo -Resistance kunye nobushushu yokusebenza max. Zingasetyenziswa ngokubanzi kunyango, izinto ezinganyibilikiyo ezingenamveliso, amashishini amachiza kwizixhobo zoomatshini bokucoca isakhelo, amacebo okucoca icentrifuge, izihluzi ezincamathelayo njl.
Ipholiyesta yokuCoca ilaphu iMonofilament yokuCoca ilaphu yeoyile yePalm
Ipholiyesta lokucoca ilaphu series, ezenziwe ipholiyesta ifayibha (PET), zibandakanya amalaphu DAPles, amalaphu PET ende intambo, kunye PET monofilament amalaphu.These iimveliso ilifa iipropati olomeleleyo acid-ukumelana, enobulungisa alkali-ukumelana kunye nobushushu yokusebenza max. Zingasetyenziswa ngokubanzi kunyango, izinto ezinganyibilikiyo ezingenamveliso, amashishini amachiza kwizixhobo zoomatshini bokucoca isakhelo, amacebo okucoca icentrifuge, izihluzo ezincamathelayo njl njl.
Egqithileyo ilaphu lokucoca amayeza
Okulandelayo: Ibhegi yokuhluza
isihluzo sokucoca ilaphu
Ingubo yeRiqi yokuCoca ilwelo kunye nokwahlula okuQinisekileyo kweShishini eliqinisekileyo kubandakanya uMzi mveliso weMigodi, iCandelo leMichiza, uMzi-mveliso wokutya, uMzi mveliso weMetururgy, uKhuseleko lweNdalo ngonyango lwamanzi, njl njl. Unyango, Ukuxinana kwamalahle, Ukombiwa kweMigodi yeGolide, iCopper, iZinc, iNickel, i-Iron, udaka oluBomvu, isichumisi se potash, i-vanadium ore, ukuphela kwecoa ...
Isihluzi se-PTFE saziva
Icebo lokucoca ulwelo lwe-PTFE laziva ngathi i-PTFE ilungele ngakumbi iimeko ezigwenxa ezifuna ukumelana nokubola kunye nokuphila ixesha elide kwezinto zokucoca, ukuphathwa komlilo ngamalahle avuthayo, ukutshisa inkunkuma, imveliso emnyama yekhabhoni kunye nemveliso yeTiO2. Ingasetyenziselwa inkqubo yokuqala yokunyibilikisa isinyithi kunye nokucokisa ezinye izinyithi kunye nemveliso yemichiza. Isetyenziswa ngokubanzi kwintsimbi, amandla, inkunkuma yokutshisa igesi kunye nezinye iindawo ezinobunzima. Iibhegi zokucoca, ingxowa yomqokeleli wothuli, du ...
Isicoci sobungqina bamanzi kunye neoyile baziva
Icebo lokucoca ulwelo lwamanzi kunye neoyile luvakala ngexesha lokusebenza kwengqokelela uthuli lwebhegi, uthuli olukwigasi luqulathe ukufuma kunye neoyile ngakumbi, kunye nothuli oludityaniswe nobumdaka. Kuyenzeka ukuba yenze ifilimu yamanzi okanye ifilimu yeoyile kumphezulu wothuli kunye nokunyusa ukunamathela, okuluncedo ekubambeni uthuli. Kodwa iya kwenza kube nzima ukucoca uthuthu. Ngokukodwa xa iqondo lobushushu eliphezulu irhasi ikwimeko yokufuma ephezulu, le meko yokuvalwa ngenxa yesiphumo sokupholisa irhasi yangaphandle ...
Ilaphu lokucoca iMonofilament
Ilaphu lokucoca ulwelo lweMono ilaphu lokucoca ilaphu lokucoca ilaphu lokucoca ilaphu lisetyenziswa ikakhulu kwifilitha yokuhluza, kubandakanya igumbi lokucoca ulwelo, iBelt lokucoca ulwelo, ulwelwesi lokucoca ulwelo, ikhephu, ipleyiti kunye nefreyimu yesakhelo sokucoca, iDisk yokuCoca iMatshi, njl.ilaphu lethu lokucoca ulwelo, inaliti engeyiyo ephothiweyo yaziva ukuba yenzelwe ngokukodwa ukucocwa kwesinyithi sokucoca ulwelo, ngokuchanekileyo kokucoca ulwelo, njl.
Ingubo yokuCoca i-fiberglass yothuli
Inaliti yeglasi yefayibha evakalayo luhlobo lweemveliso ezinobushushu obuphezulu, Yenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zemicu, ezinje ngefayibha yeglasi kunye nefayibha ye-aramid, iimveliso zinokumelana ngokugqwesileyo kubushushu obuphezulu, ukungabikho kokuzinza kunye nokuzinza okubonakalayo, isetyenziswa ngokubanzi kuqhushumlilo igesi, ikoyile yeziko kunye neminye imisebenzi yokususa uthuli. Imodeli yeMveliso RQ-MT-800 Ifayibha yeZinto zePhepha lePolyester eliSisiseko I-fiber ye-Glass yeScrim Ukutyeba mm ≥2.1 yeYunithi Ubunzima g ...
ilaphu lokucoca amayeza
Ibhedi yelaphu ye-Spirulina Powder Granulator yengubo, Spirulina Powder Spray Ukuqwayita ibhegi yelaphu, ilaphu lokucoca i-antistatic, ukomisa ingxowa yelaphu. uphawu: permeability umoya olungileyo, kulula ukuba ukucoca kwaye zinokuphindwa zisebenze, ukuhlangabezana neemfuno zamayeza / kushishino ukutya Antistatic ingxowa amanzi ngelaphu ubungqina ingxowa ilaphu esetyenziselwa granulation izinto viscous kakhulu, ezifana luthathe umgubo. Ineempawu engxoweni ilaphu non-stick, permeability elungileyo, effe elungileyo ebilayo ...